Japana: Nodimandry i Kazuo Ohno, fanta-daza amin’ny Butoh · Global Voices teny Malagasy
Japana: Nodimandry i Kazuo Ohno, fanta-daza amin'ny Butoh
Voadika ny 02 Jolay 2010 6:36 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, 简体中文, Français, اردو, Español, English
Kazuo Ohno, manan-talenta fanta-daza ary iray amin'ireo ray mpamorona ny Butoh, dia nodimandry tamin'ny 1 Jona teo amin'ny faha-103 taonany. Ampahany amin'ny tantaram-piainany nomen'ny Kazuo Ohno Dance Studio :
Rehefa mandihy izy dia mampitombo hery ny tenany ihany. Tonga olona mpanome hery ny hafa ilay lahiantitra iray toy ny olon-drehetra ihany. Izany no antony itiavan'ny olona mifanerasera amin'i Kazuo. Niaina fotoana ela izy, ary nanohina mafy ny atifon'ny olona. Kazuo Ohno dia mpanakanto izay nampitombo ny fahefa-manaon'ny olombelona.
Ny Butoh dia dihy fiomanana niforona tany Japana taorian'ny Ady Lehibe Faharoa, miavaka amin'ny fandokoana ny vatana ho fotsy sy ireo fihetsika maneho hevitra sy fijaliana.
Ity manaraka ity dia horonantsary avy amin'ny “Beauty and Power” antsoina hoe “Talanjona manoloana an'i La Argentina”. Notarihan'ilay lehilahy iray hafa namorona ny Butoh, Tatsumi Hijikata ary naseho voalohany tamin'ny 1977, ity tantara ity dia fanomezam-boninahitra an'ilay mpandihy Espaniola Antonia Mercé (fantatra amin'ny hoe “La Argentina”), izay nojeren'i Ohno an-tsehatra tamin'ny 1929 fony izy vao 22 taona.
Maro ireo nahatsiaro ny fotoana nahitany an'i Ohno mandihy sy ny nanamarika azy ireo tamin'izany. Michiko Murayama ao amin'ny blaogy True Colors, tamin'izy nahita voalohany an'i La Argentina, am-polontaonany maro lasa izay:
Nalalaka ara-panahy sy ara-batana tanteraka izy hampiasainy hifanakalozana hery tsy hita maso amin'ireo mpanatrika azy, ary tsy tanako intsony fa dia nikakakaka aho. Tena nahafinaritra aoka izany ny nijery azy nanatanteraka tamim-pahaizana ireo fifandridrana mendri-piderana. Toa niparitaka teny amin'ny habaka rehetra teny ny fiombonan'ny vatana sy ny fanahy ho iray, tsy voakitiky ny fahamatorana mihitsy, ary tsapa ho feno fahalalahana tokoa izany.
Tsara tarehy, mampihomehy, tsotra, feno herim-po sy fitiavana… izany no fiainany.
Nandritra izany fotoana izany, nikaon-doha andro aman'alina aho tamin'ny famoronana dihy miaraka amin'ireo mpandihy namako, niezaka ny hahita sehatra vaovao. Rehefa mangetaheta fanovàna ny olona iray, tsy mahagaga raha mipoitra ny tahotra sy ny fisalasalàna. Fotoana toy izany no nanatrehanay ny fampisehoany, ary tsaroako fa fatratra loatra ny hafaliako nony nandao ny teatra aho, nahazo herim-po sy fahavitrihana tsy manam-petra.
Mitanisa ireo zava-niainany koa i koyu, mpilalao fototra, ary mamintina:
Araka izay efa nosoratako foana tany aloha, ny butoh dia endrika kanto izay aingam-panahy nanampy ahy tamin'ny asa famoronako manokana.Ohno Sensei, misaotra sy mankasitraka anao tamin'ireny taona maro ireny.
Ilay mpitoraka blaogy fujita244 dia niteny:
Tsy tanjaka no nasehony tamin'ny vatany fa ny fanonjan'ny fanahy sy ny fo vita amin'ny felam-boninkazo. Ny fanahy malemy mihitsy no asehon'ny fahanterany sy ny vatany mikentrokentrona.
Taorian'ny nahatratrarany ny faha-70 taonany izay izy vao tena nalaza maneran-tany, ary mbola nandihy izy tamin'ny faha-80 sy 90 taonany. Nandritra izany fotoana izany no nahalasa ahy ho mpankafy.
Kengo Nakamura dia namoaka sary mahafinaritra vitsivitsy misy an'i Ohno nandritra ny filalaovana an-tsehatra ilay tantaran'i Yukio Nakagawa, “Hanagurui” (Hadalàn'ny voninkazo) tamin'ny 2003.
Tamin'ny fitsingerenan'ny faha-100 taonany, mpaka sary 47 izay voasarika manokana sy voafaritra taminy mihitsy aza na ahoana na ahoana, no niara-niasa nanao fampirantiana sary mitondra ny lohateny hoe “Kazuo Ohno araka ny firaketana an-tsary nataon'ireo mpakasary”. Ny komity dia notarihan'i Eikoh Hosoe, andry iankinan'ny tontolon'ny fakàna sary maoderina Japoney.
Na dia taorian'ny nampalemy azy aza dia mbola nahita fomba hanehoany hevitra foana i Ohno amin'ny fampiasàna ireo tànany sy ny tratrany: